January 13, 2022 - Channel Lover
ေန႔စဥ္ မီးျပတ္ေနေသာ္လည္း မီးထပ္မံျပတ္ေနဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ( အခု မီးျပတ္ေနလို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္…. ေနာက္လည္း ထပ္ျပတ္အုံးမွာမို႔ ႀကိဳၿပီးေတာင္းပန္ပါတယ္……)
January 13, 2022 by Channel Lover
ေန႔စဥ္ မီးျပတ္ေနေသာ္လည္း မီးထပ္မံျပတ္ေနဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ( အခု မီးျပတ္ေနလို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္…. ေနာက္လည္း ထပ္ျပတ္အုံးမွာမို႔ ႀကိဳၿပီးေတာင္းပန္ပါတယ္……) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၉၇၀) မဂၢါဝပ္ခန႔္ ဆက္လက္ေလ်ာ့နည္းေနတာေၾကာင့္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ မီးထပ္မံျပတ္ေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ၁၃၂ ေကဗြီ ဘီလူးေခ်ာင္း(၂)-တီက်စ္ ဓာတ္အားလိုင္းမွာ (၂)ႀကိမ္ေျမာက္ တာဝါတိုင္မ်ား ထပ္မံဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမွ ထြက္ရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၂၂၀)မဂၢါဝပ္ခန႔္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္သို႔ ပို႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္လ်က္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယင္းအျပင္ ဓာတ္ေငြ႕ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ LNG ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ (၇၅၀)မဂၢါဝပ္ခန႔္မွာ ရပ္တန႔္ထားရျခင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္း … Read more
တော်လှန်ရေးအတွက် သန္ဓိဋ္ဌာန် ကဗျာလေးတစ်ခု ပြောပြလာတဲ့ လင်းလင်း
January 13, 2022 January 13, 2022 by Channel Lover
ပြည်သူ့​တော်လှန်​ရေးမိသားစုစကားဝိုင်းမှ ပြည်သူ့ဘက်​တော်သား ​​တေး​ရေးလင်းလင်း၏ သန္ဓိဌာန် ကဗျာ ⭐️တော်လှန်စာ⭐️ ဒီ​နွေဦး​တော်လှန်​ရေးကြီးက​နေ ပြည်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက် လားရာတစ်​နေရာဆီ မျဥ်းခြား​ပေးလိုက်တဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း​တွေ.. ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစုံ​တွေ.. ကိုယ်ကျိုးရှာ အခွင့်အ​ရေးသမား​တွေ.. နိုင်ငံ​ရေးသစ္စာ​ဖောက်​တွေ.. ‘ငါ’ အ​ခြေပြု ပညာတတ် ​အောက်တန်းစား​တွေ.. အားလုံး.. အားလုံး​သော ထိုသူများဟာ လူထုတည်​ဆောက်မယ့် နိုင်ငံ့အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဘယ်​ ​​သော အ ခါ မှ… လူ ​တော မ တိုး ​စေ ရ… ဤသို့​ပြောလို့ ငရဲရမယ်ဆိုရင်လည်း ထိုငရဲအား နိဗ္ဗာန်ထက် ပိုရင်ခုန်ပါ၏.. ​တေး​ရေး လင်းလင်း ၁၂-၁-၂၀၂၂ ပြည်သူ့​တော်လှန်​ရေးမိသားစုစကားဝိုင်းမှ ပြည်သူ့တော်လှန်‌ရေး မုချ အောင်ရမည်။ OFP နဲ့ MOD တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်​လျက်ရှိ​သော ပြည်သူ့​တော်လှန်​ရေးမိသားစု People’s Revolution … Read more
BGF တပ်ထဲ စစ်မူ့ထမ်းစိတ်မရှိသောကြောင့် လူငယ်တွေ KNU နယ်မြေထဲသို့ထွက်ပြေးလာပြီး KNLA တပ်ထဲဝင်ရောက်
ဘားအံ ႏွင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငို/ ျမဝတီ ေဒသတစ္ဝိုက္မွာ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ BGF တို႔သည္ ျပည္သူ လူငယ္ေတြကိုအတင္း စစ္မူ႔ထမ္းခိုင္းခဲ့သည့္အတြက္ လူငယ္ေတြက အၾကမ္း ဖက္စစ္ေကာင္စီႏွင့္ BGF တပ္ထဲ စစ္မူ႔ထမ္းစိတ္မရွိေသာေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ KNU နယ္ေျမထဲသို႔ထြက္ေျပးလာၿပီး KNLA တပ္ထဲဝင္ေရာက္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္မူ႔ထမ္းၾကသည္။ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း… zoee အဲလိုကလေးတွေအများကြီးနော် ပြောမကောင်းလို့ သတင်းထွက်လာမှ တင်လိုက်တာ စကစနဲ့ အပေါင်းပါ BGF မှ ကလေးတွေဟာ စစ်ထဲသွင်းနေမှုကြောင့် ထွက်ပြေးပြီး KNU နဲ့ပူးပေါင်း စခများကို ချနေကြသော သူရဲကောင်းလေးများ ဘားအံ နှင့် မြိုင်ကြီးငို/ မြဝတီ ဒေသတစ်ဝိုက်မှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် လက်အောက်ခံတပ် BGF တို့သည် ပြည်သူ လူငယ်တွေကိုအတင်း … Read more
သာမည ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ မုဆိုးရွှေအိုးရကိန်းအချိန် နဲ့ အစွမ်းထက် ဂါထာတော်
သာမည ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ မုဆိုးရွှေအိုးရကိန်းအချိန် နဲ့ အစွမ်းထက် ဂါထာတော်သာမည ဆရာတော် ဘုရားကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သော အ ချိန်အခါ ရွေးနည်းတွင် နေ့ တစ်နေ့ကို အချိန်အပို င်းအခြားလိုက် ကောင်းသော အချိန်နှင့်မကောင်း သော အချိန်ဟု အကြမ်းဖျင်း ခွဲခြားထား ပါသည်။ ငွေကြေးဓနနှင့် ဆိုင်သော စန်းနက္ခတ်တို့ ဖြစ်ထွန်းအားကောင်းသော မုဆိုးရွှေအိုးရကိန်း အချိန်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။တနင်္ဂနွေနေ့တွင် နံနက် ၁ဝနာရီ ၄၉မိနစ်မှ နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၂ မိနစ်အတွင်း၊ တနင်္လာနေ့ တွင် နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၃မိနစ်မှ ညနေ ၃ နာရီ ၃၆ မိနစ် အတွင်း ၊ အင်္ဂါနေ့တွင် … Read more
ေနာက္လေတြမွာလည္း မီးဆက္လက္ျပတ္မွာျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ နားလည္ေပးၾကဖို႔ SAC ႀကိဳတင္ေျပာ
နောက်လတွေမှာလည်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်းတွေမှာ လျှပ်စစ်မီးလျော့နည်းပြတ်တောက်မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်မယ်လို့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ-SAC ရဲ့ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာမှာ ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ထားပါ တယ်။လက်ရှိလျော့နည်းနေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ၉၇၀ မဂ္ဂဝပ်ခန့်အတွက် ဝန်အားထိန်းညှိမှုအရ တချို့နေရာတွေမှာ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုများပြား တဲ့ မနက် ၇ နာရီကနေ နေ့လယ် ၁၁ နာရီနဲ့ ညနေ ၅ နာရီနဲ့ ၇ နာရီ အတွင်းမှာ ဝန်အားလျော့ချမှုတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေရှိပါက နားလည်ပေးကြဖို့နဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ တာဝါတိုင်တွေကို အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီး လိုအပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အမြန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ စီမံကိန်းအသစ်တွေ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်ကို ပို့လွှတ်နေတဲ့ ဓာတ်အားတိုင်တွေ … Read more
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ဥရောပ နောက်ဆုံးသတိပေးပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခြွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ SAC ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂ ပြောကြား ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထူးတရားရုံးကနေ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ်လေးနှစ်ထပ်တိုးချမှတ် လိုက်ခြင်းဟာ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်အရဖြစ်တာကြောင့် ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ-SAC ရဲ့ အခုလို လုပ်ရပ်ဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာရေးရာနဲ့ လုံခြုံရေးပေါ်လစီဌာနရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နဘီလာ မက်စရီလီရဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံက တစစီပြုတ်ကျပျက်စီးနေတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အခြေအနေကို ပြသနေတာဖြစ်သလို၊ ဗြောင်ကျကျ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ SAC အာဏာရယူတဲ့အချိန်ကစပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ် နောက်ကြောင်းပြန်သွားနေတာကို ပြသချက် နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ … Read more